६० वर्ष पछि लकडाउनका बेला समुन्द्रमा देखियो चमत्कारिक दृश्य – नेपाली सूर्य
६० वर्ष पछि लकडाउनका बेला समुन्द्रमा देखियो चमत्कारिक दृश्य
April 29, 2020 April 29, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on ६० वर्ष पछि लकडाउनका बेला समुन्द्रमा देखियो चमत्कारिक दृश्य
काठमाडौं । विश्वका अधिकांश देशहरुले कोरोना भाइरसको महामारी फैलिनबाट रोक्नका लागि लकडाउन गरेका छन् । मानिसहरु घरमै कैद भएका छन् । यसैबीच प्रकृतिमा भने अनौठा कुराहरु देखिन थालेको छ ।
आकाशमा खगोलीय घटनाहरु पनि अनौठा र दुर्लभ देख्न पाईएको छ । प्रकृतिमा यस्तो अनौठो दृश्य भने मेक्सिकोमा देखिएको छ ।अल्कापुल्कोस्थित समुन्द्र तटमा नीलो रंगको समुन्द्री लहर देखिएको छ । यो दृश्यलाई दुर्लभ मानिएको छ ।मानिसहरुका लागि उत्सुकताको विषय बनिराख्ने उक्त दृश्य देखिएपछि मानिसहरु लालयित भएका छन् ।
एक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार यो दृश्य ६० वर्षमा पहिलोपटक देखिएको हो । यो दृश्यले समुन्द्रको पानीमा प्रदूषणको कमी भएको अनुभूति गराउँदछ ।लकडाउनका कारण मानिसहरु घरमै कैद भएको कारणले प्रदूषणको स्तर कम भएको छ । परिणातः यो दृश्य देख्न पाईएको हो ।
यो एक अनौठो वैज्ञानिक घटना भएको कतिपय बुझाई रहेको छ । जसलाई बायोलुमनेस्सेन्ट भन्ने गरिन्छ । यसको मतलव कुनै जीवको शरीरबाट प्रकाश निस्किनु ।यो तब मात्र सम्भव हुन्छ,जब पूरा प्रदूषण मुक्त भएको छ । विशेषज्ञका अनुसार पानीमा माइक्रोओर्गेज्मको बायोकेमिल रिएक्शनका कारण यस्तो घटना भएको हो ।
प्रदूषणका कारण यस्ता प्राकृतिक घटनाहरु कमै देखिने विशेषज्ञहरुको बुझाई छ ।
मनकारी घरबेटी : ‘हरेक बिहान सोध्छन् केही समस्या छ ?’
को हुन् सामाजिक संजालमा भाइरल भएकी बडीबिल्डर सुन्दरी ? (तस्विरहरु सहित)
युवतीको बयान: उसको जागिर थिएन्, म संग बिहे गर्छु भन्दै यौ’न स’म्पर्क गर्थ्यो, जब जागिर खायो त्यसपछि …..
November 8, 2021 Nepali Surya
के अनिल कपुर जवान देखिन सर्पको रगत पिउँछन् ? अभिनेताले फर्काए जवाफ
September 16, 2021 Nepali Surya
एउटा हातै बिना यसरी कुदाउछन् ट्याक्टर अनि बोक्छन् यसरी बिसाल भारि (हेर्नुस् भिडियो)
August 8, 2021 Nepali Surya